Ọgwụ Neuropsychological na usoro ọgwụgwọ okwu (afọ nke atọ) - Ọzụzụ Cognitive
Ọrịa Neuropsychological na usoro ọgwụgwọ okwu (afọ nke atọ)
Here nọ ebe a: Home » Ọrụ anyị » ỌR --A - ụmụ amaala okenye » Ọrịa Neuropsychological na usoro ọgwụgwọ okwu (afọ nke atọ)
Isnye ka ọ bụ: Ndị okenye nwere ihe isi ike n'isi, itinye uche, atụmatụ na asụsụ
Ogologo oge ole ka ọ ga-adịgide: Ihe dị ka nkeji 60 kwa nzukọ
Ego ole ọ na-efu: € 40 kwa nzukọ
Ọ bara uru karị n'ihe banyere enwetara nke amaghị (dịka ọmụmaatụ na - eso ọnya azụ, ma ọ bụ mmerụ isi). N'ọtụtụ ọnọdụ enwere ike ịtọ ụzọ ndozigharị nke na-enye ohere iji belata mgbake nke arụrụ ọrụ merụrụ ahụ ma ọ bụ ịchọta ụzọ iji dozie nsogbu ahụ: ọ nwere ike ịbụ, dịka ọmụmaatụ, ikpe nke enwere nsogbu asụsụ (aphasia), nke ebe nchekwa ma obu Nlebara anya, nhazi na nhazi nke ihe omume (deficits Executive);
Ọ na-achọta abamuru ya n'ọnọdụ ebe ọgbụgba na-agbada na-ewere ọnọdụ na ọ dị mkpa ka ọ kwụọ ụgwọ ma ọ bụ jiri nwayọ nwayọ, dịka ọ dị n'ihe banyere ọrịa neurodegenerative. Usoro ihe omume a nwere oge nzukọ dị iche iche, site na nke a, a na-anwa iji kpalie ọrụ ọgụgụ isi (iji gbaa mgbake ume, dịka ọ na-eme na otutu sclerosis, dịka ọmụmaatụ) ma ọ bụ usoro ịma mma nke na-arụ ọrụ (dịka ọ dị na ya) Alzheimer ma ọ bụ ụfọdụ vaskụla dementias, dịka ọmụmaatụ) iji kwado onwe onye ọrịa ruo ogologo oge o kwere mee, mgbe ọ na-anwa ibelata nrụgide nke onye otu ezi na ụlọ nke na-elekọta ya.
Buru ọnọdụ nke normality (ịka nká) ma ọ bụ di ịdị nwayọọ nghọta (MCI) ọ ga-ekwe omume isonye na nkuzi mkpali iji mee ka arụmụka na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ebe dị ka ike ịchekwa ozi ọhụrụ, lekwasị anya n'ihe omume mmadụ ma jikwaa nke ọma. Ndị a bụ ọrụ ana - eme na obere ụmụ nwere njiri mara otu na ndị ọkà mmụta gbasara mmụọ na-elekọta.
Na ọnụnọ nke oke cognitive deficits ọ bụ ugboro ugboro na ndị ezinụlọ nke onye ọrịa ahụ (karịchaa ndị kacha soro ya na ndụ kwa ụbọchị) nwere ike ịbịakwute ọnọdụ nke nnukwu ihe isi ike n'ịchịkwa mgbanwe omume ya. N'okwu ndị a, nkwado nke onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ, onye nwere ike ịkọwa ihe mgbanwe onye ọrịa ga - emegide, na ụzọ dị iche iche a ga-esi tinye ya iji jikwaa ha bara ezigbo uru.